Moov Madagascar: Mba ilazao ny fiovana fa aza mamely tampoka e!
2008-04-11 @ 14:43 in Ankapobeny
Noho ny antony manokana dia voatery nampiditra izany aterineto izany any an-trano ny tena. Tsy afaka ny tsy afa-manao famandrihana isam-bolana izany ny tena fa izay takatry ny tena aloa mialoha ihany no ezahina itsitsiana. Tsy henoko loatra ny hatsara na haratsin'ny vokatra hafa fa dia izay efa misy milaza mialoha ihany no azo idirana e! Dia izay no nahatonga ny safidy ho any amin'ny moov aloha.
Ny azo ihafiana ihany moa no nidirako sady rehefa mahita ny karatra hoe 10 000ar ahazoana mivoivoy mihoatra (izay aloha no fahazoako ny + e) ny 5 ora. Tsy nahita ny 20 000ar mihitsy ny tena satria vitsy hoe ny mividy ireny ka tsy sahy maka ny mpivarotra. Mahihitra ihany ny tena ka dia noraisiko naoty sy natambatro tsara ny saran'ny efa lany. Efa nisy nahavariana ahy manko ny fahalaniany vetivety. Iny fa 4 ora sy sasany no lany dia tsy manana sanda azo idirana aterineto intsony, hono, aho. Tsy maintsy tezitra ny tena satria tsy vita akory izay natao dia tapaka ny fifandraisana.
Nankao amin'ny masoivoho tao Analakely aho nanadihady kely sy nilaza ny fahagagako nahalany sahady ny sara miandry. Dia namaly ny mpandray fa raha ora malalaka no 5 ora fa raha amin'ny ora feno kosa dia 2 ora sy sasany iny dia lany. Eo aho vao gaga. Nisy fisondrotana ve sa izany hatramin'izay? ny tena manantena fidinambidin'ny sara nefa hay miakatra izy ity. Dia hoy aho an'eritreritra hoe tsy adalan'ny mpanolotra antsom-pifandraisana anie ny miteny mialoha ny fisondrotana sa mbola vitsy loatra ny manana aterineto any an-trano ka tsy mendrika ampilazaina mialoha? Dia milaza aminareo namana eto Madagasikara io valinteny azoko io aloha aho sao mbola misy tsy mahalala isika.